ringlock, cuplock သို့မဟုတ် H frame စသည်တို့အတွက်လက်ကိုင်အိတ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Zhongming
ဦး ခေါင်း & ဂျက်အခြေစိုက်စခန်း
jack base ကိုအသုံးပြုခြင်း - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌သံမဏိပိုက်များနှင့်ငြမ်းများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ငြမ်းနှင့်အမြင့်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလေးမနှင့်ချိန်ခွင်ကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအိမ်ခြံမြေအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သုံးဖက်မြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကြောင့်အိမ်ခေါင်မိုးအထောက်အပံ့သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
support အပေါ်ပိုင်းကိုသံမဏိပိုက်၏အပေါ်ဆုံးတွင်အသုံးပြုပြီး၊ ကိုယ်ထည်သည်အပေါ်ဆုံးတွင်ရှိပြီး၊
bottom အောက်ခြေထောက်ခံမှုကိုဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရာတွင်သံမဏိပိုက်၏အနိမ့်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်၊ ကိုယ်ထည်သည်အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်၊ ကိုယ်ထည်ကိုခေါက်။ မရပါ;
2. ဝက်အူ၏ပစ္စည်းအရ, ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်: ဆွန်း jack ကိုနှင့်အစိုင်အခဲ jack ကို။ အဆိုပါအခေါင်းပေါက်၏ ဦး ဆောင်ဝက်အူပိုမိုပေါ့ပါးသော, ထူထပ်တဲ့နံရံကပ်သံမဏိပိုက်၏လုပ်။ , solid solid jack ကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပိုမိုလေးလံသည်။
၃။ ဘီးလားမရှိသည်ဖြစ်စေအရ၎င်းကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ ဘီးအပေါက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သွပ်ရည်စိမ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရွေ့လျားနိုင်သောငြမ်း၏အောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုကြသည်။ သာမာန်ဂျက်များကိုအင်ဂျင်နီယာအဆောက်အ ဦး များဆောက်လုပ်ရာတွင်တည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
4. ဝက်အူ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ, အစိုင်အခဲ jack ကို hot-rolled screw နှင့် cold-rolled screw နှစ်ခုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပူသောလှိမ့်ဝက်အူလှပသောအသွင်အပြင်နှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်; အအေးလှိမ့်သောဝက်အူသည်လှပသောအသွင်အပြင်ရှိပြီးစျေးနှုန်းအနည်းငယ်သက်သာသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဝက်အူ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နေရာအမျိုးမျိုးတွင်ထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ဆင်တူသည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မတူသည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှုထောင့်ငါးခုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
၁) ကိုယ်ထည် - ကိုယ်ထည်၏အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားသည်မတူညီသောဒေသများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကွဲပြားသည်။
၂) နံရိုးများကိုအားဖြည့်ခြင်း - ဝက်အူလှည့်နှင့်ချိတ်ပိတ်များတွင်အားဖြည့်နံရိုးများရှိမရှိ၊ စီမံကိန်း၏လိုအပ်ချက်များအရ၊ ဝက်အူ၏ကြာမြင့်သောအမြှေးများသည်တိုက်ရိုက်အားဖြည့်နံရိုးနှင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအောက်တိုတောင်းသောအောက်ခံများသည် ခဲတပ်ဆင်ထားကြသည်။
၃။ ဝက်အူ၏အရှည်သည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၄၀ မှ ၇၀ အထိဖြစ်ပြီး၊ ဝက်အူအထူယေဘုယျအားဖြင့်φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm။
၄) အခွံမာများကိုညှိရန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုရှိသည် - သံသတ္တုများပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်း။ အခွံမာသီးအခွံမာသီးအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည်ပေါ့ပါးခြင်းသို့မဟုတ်လေးလံသောအရွယ်အစားရှိသည်။ အခွံမာသီးပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပန်းခွံခွံနှင့်တောင်ပံဝက်အူ
အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, သတ္တု Cuplock ငြမ်း, Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,